Archive du 20181227
Fanoherana ny Hala-bato Eny amin’ny kianjan’ny 13 mey ny fotoana
Voaporofo izao fa tena nisy tokoa ny fanodinkodinana ny voka-pifidianana, halatra ary hosoka niniana natao tamin’ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa notanterahana ny 19 desambra lasa teo.
Valim-pifidianana avoakan’ny CENI Niainga tamin’ny hosoka sy halatra
Mitohy ny fampitahana PV sy ny fisavana ireo antontan-taratasy hafa nampiasaina nandritra ny fifidianana farany teo eny amin'ny CENI. Ny tsy fahatomombanana hita mandritra izany dia tsy azon'ny CENI andraisana fepetra hanovany ny vokatra vonjimaika nokirakirainy fa kosa azon'ireo kandida entina hanamafisana ny fitoriana hapetrak'izy ireo eny amin'ny HCC, hoy ny CENI.
Filohan’ny CENI Hery Rakotomanana Nahoana no tsy andrenesam-peo firy intsony ?
Niala tamin’ny fampandaniana ny lalàmpanorenana petatoko tamin’ny taona 2010 nampanaovina azy ny Filohan’ny CENI ankehitriny Hery Rakotomanana, dia tratry ny kiana samihafa indray ankehitriny.
Hary Razafindrazaka “Ataovy lany amin’ny fahamarinana ny filoham-pirenena vaovao !”
Nivoaka tamin’ny fahanginany ny filoha lefitry ny antoko Leader Fanilo, Elatra Jean Max Rakotomamonjy, misahana ny faritanin’Antananarivo, Hary Razafindrazaka.
Rajoelina sy ny fanonganam-panjakana 2009 Tsy hahazo rirany mihitsy amin’ny mpamatsy vola
Tsy azo fafana ny habibiana vitan’i Andry Rajoelina teto amin’ny firenena tamin’ny famotehana nataony tamin’ny taona 2009. Tsy vitan’ny potika sy rava ny orinasa Malagasy maro namelona fianakaviana an’aliny fa nanao tari-dositra ihany koa ny mpamatsy vola tamin’ireny.
Pr James Ratsima Mbola hanao ampamoaka maro momba ny hala-bato
Tsy hanaiky ny profesora James Ratsima mpanohana ny kandida Marc Ravalomanana fa tsy maintsy hamoaka ny marina rehetra mikasika ny hala-bato niseho nandritra ny fifidianana fihodinana faharoa mba tena hisehoan’ny marina.
Ambina bileta tokana Nisy nampiasaina tamin’ny hala-bato ?
Anisan’ny notakian’ny K25 ny fanamarinana ny bileta rehetra nampiasaina sy ny ambiny tamin’ny birao fandatsaham-bato. Banga eo amin’ny 25 ka hatramin’ny 50 eo hatrany ny ambina bileta isaky ny birao fandatsaham-bato nohamarinina, raha ny nambaran’i Faniry Ernaivo.
Efa tena maty eritreritra ve e ?
Efa tena mihinana fanafody fampatoriana marina angamba ianareo ry Jean raha mbola mahita torimaso amin’izao halatra be vata ataonareo izao a !
Manantsoa Victor « Mila mivavaka isika !»
Efa niteny izahay teo anivon’ny Hetsika Fanorenana Ifotony (HFI), hoy ny minisitra teo aloha Manantsoa Victor fa mila fanarenana ifotony sy mamerina ny fifampitokisan’ny samy Malagasy isika aloha izao vao miditra amin’ny fifidianana.
Fanaratsiana ny Charmelle Beauté Vao mainka nampitombo ireo olona tonga nanatona azy
Niteraka resabe tamin’ny tambajotran-tserasera fesiboky ny herinandro teo ny resaka nataona renim-pianakaviana iray nikasa ny hanao volo tao amin’ny Charmelle Beauté Ampasampito saingy tsy nifanaraka ny roa tonta tamin’ny ora farany.
Nofo mangatsiakan’i Marthe Hervée Ho tonga anio tolakandro eto an-tanindrazana
Anio alakamisy 27 desambra folakandro no higadona eny amin’ny seranam-piaramanidina eny Ivato ny nofomangatsiakan’Itompokovavy Marthe Hervée filoha mpanorina ny sekoly tsy miankina IMH sy ny Radio Vaovao Mahasoa na ny RVM.
Rtoa Atallah Beatrice Mila havaozina ifotony ny rafitry ny baolina kitra Malagasy
Ny fijerena ny fanomanan’ny Barea ny CAN 2019 no vaindohan-draharaha imasoan’ny “Comité de normalisation” ny baolina kitra Malagasy ankehitriny, hoy Rtoa Atallah Beatrice filohany tao
Seksion’ny Basikety Ambohidratrimo Hifarana ny Basket Be andiany voalohany
Hifarana amin’ny sabotsy 29 desambra 2018 izao, eny amin’ny kianja RFI Ivato Areoport, ny fifaninanana BASKET BE 2018 ANDIANY VOALOHANY nokarakarain’ny SBBA “Seksion’ny Basket Ball Ambohidratrimo” tarihan’ny filohany, Rajoelimanantsoa Fidson Phaelien.
Tonga nanome voninahitra manokana ny fanokafana ofisialy ny hetsika baolina kitra an’olona 6 “The Best Fans” andiany faha-2 karakarain’ny Gasyfoot eny amin’ny kianja sentetikan’Andohalo
Fandresena hitondra aiza ?
Hatramin’izay nisian’ny fifidianana teto Madagasikara na filoham-pirenena io na depiote na ben’ny tanàna, dia saika nisy savorovoro hatrany.
Sandam-bola Ariary Tsy nitsaha-nitotongana ny taona 2018
Hatramin’ny fiandohan’ity taona 2018 ity dia nitotongana hatrany ny sandan’ny vola Malagasy Ariary mihoatra amin’ny Euro sy ny dolara. Raha 3 873,76 Ariary ny Euro iray tamin’ny fiandohan’ny taona dia efa nanafosafo ny 4.000 Ariary hatrany taorian’ny enim-bolana.
HAIN-TRANO TENY AMBODINISOTRY
Ranomaso sy hiakiaka no niainan’ny olona ny firehetan’ny tranony tetsy Ambodinisotry omaly antoandro.
Nampitandrina ny avy eo anivon’ny CENI ny filohan’ny fikambanan’ireo gadra politika na FEDEP, Henry Rakotomalala na Riribe, fa hanomboka hihetsika anio, raha tsy mihemotra amin’ny fanapahan-keviny ny CENI.
Hain-trano teny Ambodin’Isotry Nanampy ireo traboina ny CUA
Trano 100 tafo no may kila vokatry ny hain-trano nitranga omaly teny Ambodin’Isotry.
HJRA Ampefiloha Misy zaza tsy ampy taona ireo toran’ny toaka
Olona folo no toran’ny toaka nandritra ny datin’ny 24 sy ny 25 desambra lasa teo nentina nanaraka fitsaboana tetsy amin’ny hopitaly HJRA Ampefiloha.
Fanatsarana ny tontolon’ny fandraharahana Ilàna ezaka maro eto Madagasikara
Mampiroborobo ny toekarena ny fahasalaman’ny tontolon’ny fandraharahana anatin’ny firenena iray.
Fitiavan-tanindrazana ara-toekarena Mila ananan’ny mpandraharaha sy mpamokatra Malagasy
Tena ilaina ny fampirisihina ny mpandraharaha sy mpamokatra, ny mpiasa sy ny mpikaroka Malagasy hanana ny fitiavan-tanindrazana ara-toekarena.